Dziviriro yedata - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Data yemunhu (inowanzo kunzi "data" pazasi) inongogadziriswa nesu chete kusvika painodiwa uye nechinangwa chekupa webhusaiti inoshanda uye ine mushandisi-inoshamwaridzana, kusanganisira zvirimo uye masevhisi anopihwa ipapo.
Maererano Art. chero akateedzana maitiro ane chekuita nedata remunhu, sekuunganidza, kurekodha, kuronga, kuronga, kuchengeta, kugadzirisa kana kushandura, kuverenga, kubvunza, kushandisa, kuburitsa kuburikidza nekutumira, kuparadzira kana chero imwe nzira yekugovera, kuenzanisa kana kubatanidza, kurambidzwa, kudzima kana kuparadzwa.
Nechiziviso chinotevera chekudzivirira data tinokuzivisa iwe kunyanya nezve rudzi, chiyero, chinangwa, nguva uye hwaro hwepamutemo hwekugadziriswa kwedata remunhu, kusvika pakusarudza kwedu tega kana pamwe nevamwe nezvezvinangwa uye nzira dzekugadzirisa. Pamusoro pezvo, isu tichakuzivisa pazasi nezve yechitatu-bato zvikamu zvatinoshandisa kuita zvinangwa uye kuwedzera kunaka kwekushandisa, sekunge vechitatu mapato vanogadzira data pamutoro wavo.
Yedu yekuvanzika mutemo yakarongwa sezvizvi:
I. Ruzivo nezvedu sebasa
II Kodzero dzevashandisi uye data zvidzidzo
III. Ruzivo rwekugadzirisa data
IV. Ruzivo rwedu otomatiki chiitiko kunyoresa
Mupi ane mutoro wewebhusaiti ino maererano nemutemo wekudzivirira data ndeiyi:
Spielpunkt - mitambo uye varaidzo
Runhare: 0162 9767 312
Nekuona kugadziridzwa kwedata kunotsanangurwa zvakadzama pazasi, vashandisi uye zvidzidzo zvedata vane kodzero
nokuda kwekusimbisa kana iyo data yakakosha iri kugadziriswa, ruzivo pamusoro pezvinyorwa zvakagadziriswa, kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pekugadzirisa data uye makopi ezvinyorwa (onawo Art. 15 GDPR);
kugadzirisa kana kupedzisa data isina kururama kana isina kukwana (onawo Art. 16 GDPR);
kusvika pakukurumidza kudzima data ine chekuita newe (cf. zvakare Art. 17 GDPR), kana, neimwe nzira, kana kumwe kugadzirisa kuchidikanwa maererano neArt. 17 Para. 3 GDPR, kurambidzwa kwekugadzirisa maererano neArt. 18 GDPR;
kugamuchira data pamusoro pavo uye inopiwa navo uye kuendesa iyi data kune vamwe vanopa / mapato ane mutoro (cf. zvakare Art. 20 GDPR);
kunyunyuta kumukuru wevatariri, chero ivo vanofunga kuti data pamusoro pavo iri kugadziriswa nemupi mukutyora mitemo yekudzivirira data (cf. zvakare Art. 77 GDPR).
Pamusoro pezvo, mupi anosungirwa kuzivisa vese vanogamuchira avo data rakaziviswa neanopa chero kugadzirisa kana kudzima data kana kurambidzwa kugadzirisa kunoitika pahwaro hweZvinyorwa 16, 17 Ndima 1, 18 GDPR inodzidzisa. Zvisinei, chisungo ichi hachipo kana chiziviso ichi chisingagoneki kana kuti chinosanganisira kushanda nesimba. Zvisineyi neizvi, mushandisi ane kodzero yekuwana ruzivo nezveava vanogamuchira.
Maererano neArt. 21 GDPR, vashandisi uye zvidzidzo zve data vanewo kodzero yekupokana nekugadziriswa kweramangwana re data rine chekuita navo, kunze kwekuti iyo data inogadziriswa nemupi maererano neArt. 6 Para. 1 lit.f) GDPR. Kunyanya, kupikisa kushandiswa kwedata kuitira chinangwa chekushambadzira kwakananga kunobvumirwa.
Yako data yakagadziriswa kana uchishandisa webhusaiti yedu ichadzimwa kana kuvharwa nekukurumidza kana chinangwa chekuchengetedza chisisashande, kudzima kwedata hakupesane nechero mitemo yekuchengetedza uye hapana rumwe ruzivo nezve nzira dzekugadzirisa dzega dzinopihwa pazasi.
a) Chikamu makuki / chikamu makuki
Isu tinoshandisa anonzi makuki pawebhusaiti yedu. Makuki madiki mameseji mafaera kana mamwe matekinoroji ekuchengetedza anochengetwa uye anochengetwa pachishandiso chako neinternet browser yaunoshandisa. Aya makuki anogadzira rumwe ruzivo nezvewe pamunhu, senge browser yako kana data renzvimbo kana IP kero yako.
Kugadziriswa uku kunoita kuti webhusaiti yedu ive-ine hushamwari, inoshanda uye yakachengeteka zvakanyanya, sekugadziriswa kunogonesa, semuenzaniso, kudhindwa kwewebhusaiti yedu mumitauro yakasiyana kana kupihwa kwebasa rekutenga ngoro.
Hwaro hwepamutemo hwekugadziriswa uku iChinyorwa 6 (1) lit b.) GDPR, chero makuki aya achishandiswa kugadzirisa data kutanga kana kugadzirisa zvibvumirano.
Kana kugadzirisa kusingashande kutanga kana kugadzirisa kondirakiti, kufarira kwedu kuri mukuvandudza mashandiro ewebhusaiti yedu. Hwaro hwemutemo ipapo Chinyorwa 6 (1) (f) GDPR.
Paunovhara internet browser yako, aya maseshi makuki anobviswa.
b) Makiki echitatu
Webhusaiti yedu inogona zvakare kushandisa makuki kubva kune vatinoshanda navo vatinoshanda navo nechinangwa chekushambadzira, kuongorora kana kushanda kwewebhusaiti yedu.
Ndokumbira utarise kune ruzivo rwunotevera kune rumwe ruzivo nezve izvi, kunyanya pazvinangwa uye zvepamutemo zvekugadzirisa akadaro echitatu-bato makuki.
c) kurasa chisarudzo
Iwe unogona kudzivirira kana kurambidza kuisirwa makuki nekuisa yako internet browser. Iwe unogona zvakare kudzima makuki akatochengetwa chero nguva. Matanho nematanho anodiwa kune izvi, zvisinei, zvinoenderana neiyo Internet browser yauri kushandisa. Kana uine chero mibvunzo, ndapota shandisa basa rekubatsira kana zvinyorwa zveInternet browser yako kana kubata mugadziri wayo kana rutsigiro. Mune iyo inonzi flash cookies, zvisinei, kugadzirisa hakugone kudzivirirwa kuburikidza nebrowser marongero. Pane kudaro, iwe unofanirwa kushandura kuseta kweFlash player yako. Matanho nematanho anodiwa kune izvi zvakare zvinoenderana neiyo chaiyo Flash player yauri kushandisa. Kana uine chero mibvunzo, ndapota shandisa basa rekubatsira kana zvinyorwa zveFlash player yako kana kubata mugadziri kana rutsigiro rwemushandisi.
Nekudaro, kana iwe ukadzivirira kana kurambidza kuisirwa makuki, izvi zvinogona kureva kuti haasi ese mabasa ewebhusaiti yedu anogona kushandiswa zvizere.
Chiziviso chekuchengetedza data chekushandiswa kweAmazon EU partner chirongwa
"Marcel Iseli anotora chikamu muchirongwa cheAmazon EU chekudyidzana, icho chakagadzirirwa kupa svikiro kumawebhusaiti anogona kushandiswa kuwana mubhadharo wekushambadzira kuburikidza nekuiswa kwezviziviso uye zvinongedzo kuAmazon.de."
Isu tinoshandisa plugins kubva kuUviral. Mushandisi wekunyoreswa kwetsamba yeUviral ndiEmarky BV Gageldijk 21, 3602AG, Maarssen, The Netherlands. Kana iwe ukanyorera kune yedu tsamba yenhau, data ichachinjana neUpviral kuti ikuise iwe mutsamba yedu yenhau. Unogona kukanzura izvi chero nguva. Unogona kuwana rumwe ruzivo pano: https://upviral.com/privacy-policy/.
Yakavanzika mutemo weEzoic
Kana iwe ukanyoresa kutsamba yedu yemahara, iyo data yawakakumbira nekuda kwechinangwa ichi, i.e. yako e-mail kero uye - nesarudzo - zita rako nekero, ichaendeswa kwatiri. Panguva imwecheteyo, tinochengetedza IP kero yeInternet connection kubva kwaunowana webhusaiti yedu, pamwe chete nezuva uye nguva yekunyora kwako. Sechikamu chekuenderera mberi kwekunyoresa, isu tichawana mvumo yako yekutumira tsamba yenhau, tsanangura zvirimo zvakadzama uye toreva ichi chiziviso chekudzivirira data. Isu tinoshandisa iyo data yakaunganidzwa nenzira iyi chete yekutumira tsamba - saka, kunyanya, haina kupfuudzwa kune vechitatu mapato.
Hwaro hwepamutemo hweichi Chinyorwa 6 (1) (a) GDPR.
Iwe unogona kukanzura mvumo yako yekutumira tsamba yenhau chero nguva zvine chekuita neramangwana maererano neArt 7 Para. 3 GDPR. Zvese zvaunofanirwa kuita kutizivisa nezvekukanzurwa kwako kana kushandisa chinongedzo chekusanyoreswa chiri mupepanhau rega rega.
Bata kubvunza / kuonana sarudzo
Kana iwe ukatibata kuburikidza nefomu rekuonana kana email, iyo data yaunopa ichashandiswa kugadzirisa chikumbiro chako. Iyo dhizaini yedata inodiwa pakugadzirisa uye kupindura chikumbiro chako - pasina kuchipa, hatigone kupindura chikumbiro chako, kana ingangoita shoma.
Hwaro hwepamutemo hwekugadziriswa uku iChinyorwa 6 (1) lit. b) GDPR.
Yako data ichadzimwa kana chikumbiro chako chazopindurwa uye kudzima hakupesane nechero mitemo yekuchengeta zvinodiwa, semuenzaniso kana pakazoitwa kondirakiti.
Mipiro yemushandisi, makomendi uye zviyero
Isu tinokupa iwe mukana wekutumira mibvunzo, mhinduro, maonero kana zviyero, zvinozonzi "mipiro", pane yedu webhusaiti. Kana iwe ukatora mukana weichi chinopihwa, isu tichagadzirisa uye nekushambadza mupiro wako, zuva uye nguva yekutumira uye pseudonym yaungave wakashandisa.
Hwaro hwepamutemo hweichi Chinyorwa 6 (1) (a) GDPR. Iwe unogona kukanzura mvumo yako chero nguva nemhedzisiro yeramangwana zvinoenderana neArt 7 Para. 3 GDPR. Chaunofanirwa kuita kutizivisa nezvekukanzurwa kwako.
Uye zvakare, isu zvakare tinogadzirisa yako IP uye email kero. Iyo IP kero inogadziriswa nekuti isu tinofarira zviri pamutemo kutanga kana kutsigira mamwe matanho kana mupiro wako ukakanganisa kodzero dzevechitatu mapato uye / kana zvisiri pamutemo.
Muchiitiko ichi, hwaro hwepamutemo iChinyorwa 6 (1) (f) GDPR. Kufarira kwedu zviri pamutemo kuri mukudzivirirwa kwemutemo kungave kuri madikanwa.
Isu tinoshandisa Google Analytics pane yedu webhusaiti. Iri ibasa rekuongorora dandemutande rakapihwa neGoogle LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, rinozodaidzwa kunzi "Google".
Kuburikidza nechitupa zvinoenderana neEU-US data kuchengetedza nhoo ("EU-US Privacy Shield").
Google inovimbisa kuti zvinodiwa neEU kudzivirira data zvinotevedzwa zvakare kana uchigadzira data muUSA.
Iyo Google Analytics sevhisi inoshandiswa kuongorora maitiro ekushandiswa kwewebhusaiti yedu. Hwaro hwepamutemo iChinyorwa 6 (1) lit.f) GDPR. Kufarira kwedu zviri pamutemo kuri mukuongorora, kugadzirisa uye kushanda kwehupfumi kwewebhusaiti yedu.
Ruzivo rwemashandisirwo uye rune chekuita nemushandisi, senge IP kero, nzvimbo, nguva kana kuwanda kwekushanya kune webhusaiti yedu, zvinotumirwa kune sevha yeGoogle muU.SA uye inochengetwa ipapo. Nekudaro, isu tinoshandisa Google Analytics neinonzi anonymization basa. Nebasa iri, Google inopfupisa IP kero mukati meEU kana EEA.
Iyo data inounganidzwa neiyi nzira inozoshandiswa neGoogle kutipa ongororo yekushanya kune yedu webhusaiti uye nezve mashandisiro ekushandisa ipapo. Iyi data inogonawo kushandiswa kupa mamwe masevhisi ane chekuita nekushandiswa kwewebhusaiti yedu uye kushandiswa kweInternet.
Google inotaura kuti haizobatanidza IP yako kero neimwe data. Mukuwedzera, Google inochengetedza
Rumwe ruzivo rwekudzivirira data rwuripo kwauri, semuenzaniso zvakare pane mikana yekudzivirira kushandiswa kwedata.
Isu tinoshandisa plug-in yesocial network Google+ ("Google Plus") pawebhusaiti yedu. Google+ ibasa reInternet rinopihwa neGoogle LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, inonzi "Google".
Hwaro hwepamutemo iChinyorwa 6 (1) lit.f) GDPR. Kufarira kwedu zviri pamutemo kuri mukuvandudza kunaka kwewebhusaiti yedu.
Rumwe ruzivo nezve anogona plug-ins uye mabasa awo akasiyana anowanikwa kubva kuGoogle
Kana iyo plug-in ikachengetwa pane rimwe remapeji aunoshanyira pawebhusaiti yedu, Internet browser yako inodhawunirodha inomiririra yeplug-in kubva kumaseva eGoogle muUSA. Nezvikonzero zvehunyanzvi, zvinodikanwa kuti Google igadzirise IP yako kero. Pamusoro pezvo, zuva uye nguva yekushanya kwako kuwebhusaiti yedu zvakarekodhwa.
Kana iwe wakapinda muGoogle uchishanyira imwe yemawebhusaiti yedu ine plug-in, ruzivo rwakaunganidzwa neplug-in nezve kushanya kwako chaiko rwunozozivikanwa neGoogle. Google inogona kupa ruzivo rwakaunganidzwa nenzira iyi kuaccount yako yemushandisi ipapo. Kana iwe ukashandisa iyo inonzi "Goverana" bhatani kubva kuGoogle, semuenzaniso, ruzivo urwu ruchachengetwa muGoogle yako mushandisi account uye pamwe yakadhindwa paGoogle papuratifomu. Kana uchida kudzivirira izvi, unofanira kubuda muGoogle usati washanyira webhusaiti yedu kana kuti ugadzirise zvakakodzera muakaundi yako yemushandisi yeGoogle.
Rumwe ruzivo nezve kuunganidzwa uye kushandiswa kwedata pamwe nekodzero dzako nedziviriro sarudzo mune izvi rinowanikwa kubva kuGoogle pa
ruzivo rwekuchengetedza data iripo.
Isu tinoshandisa Google Mepu pawebhusaiti yedu kuratidza kwatinogara uye kugadzira mafambiro. Iri isevhisi inopihwa neGoogle LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, inonzi "Google".
Kuti tikwanise kuratidza mamwe mafonti pawebhusaiti yedu, chinongedzo kuGoogle server muUSA chinotangwa kana webhusaiti yedu yapinda.
Kana iwe ukafonera chikamu cheGoogle Mepu chakabatanidzwa pawebhusaiti yedu, Google inochengeta cookie pamudziyo wako kuburikidza neinternet browser. Zvirongwa zvako zvemushandisi uye data zvinogadziriswa kuitira kuratidza nzvimbo yedu uye kugadzira mafambiro. Hatigone kutonga kuti Google inoshandisa maseva muUSA.
Hwaro hwepamutemo iChinyorwa 6 (1) lit.f) GDPR. Kufarira kwedu zviri pamutemo kuri mukugadzirisa kushanda kwewebhusaiti yedu.
Kuburikidza nekubatana neGoogle kwakatangwa nenzira iyi, Google inogona kuona kuti chikumbiro chako chakatumirwa kubva kuwebhusaiti uye kuti ndeipi kero yeIP inotumirwa.
Kana iwe usingabvumirani nekugadzirisa uku, une sarudzo yekudzivirira kuisirwa makuki nekuita marongero akakodzera mubrowser yako yeInternet. Unogona kuwana ruzivo pane izvi pasi pemusoro wekuti "Makuki" pamusoro.
Pamusoro pezvo, Google Mepu uye ruzivo rwakawanikwa kuburikidza neGoogle Mepu zvinoshandiswa zvinoenderana neGoogle Mitemo Yekushandisa https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de uye Mitemo neMamiriro eGoogle Mepu https:/ /www.google.com / intl / de_de / rubatsiro / mazwi_maps.html.
Mukuwedzera, Google inopa pasi
Isu tinoshandisa Google Fonts pawebhusaiti yedu kuratidza ekunze mafonti. Iri ibasa rinoitwa neGoogle LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, rinozonzi “Google”.
Hwaro hwepamutemo iChinyorwa 6 (1) lit.f) GDPR. Kufarira kwedu zviri pamutemo kuri mukugadzirisa uye kushanda kwehupfumi kwewebhusaiti yedu.
Kuburikidza nekubatana neGoogle kwakatangwa paunoshanyira webhusaiti yedu, Google inokwanisa kuona kuti chikumbiro chako chakatumirwa kubva kuwebhusaiti uye kuti ndeipi kero yeIP inomiririra font ichatumirwa.
Google inopa pasi apa
rumwe ruzivo, kunyanya nezvemikana yekudzivirira kushandiswa kwedata.
Isu tinoshandisa plug-in yesocial network Facebook pane yedu webhusaiti. Facebook ibasa repainternet rinopihwa neFacebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. MuEU, sevhisi iyi inozoshandiswa neFacebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, mushure meizvi zvese zvinonzi "Facebook".
Facebook inovimbisa kuti zvinodiwa neEU kuchengetedza data zvinoteedzerwawo kana uchigadzira data muUSA.
Rumwe ruzivo nezve inogoneka plug-ins uye mabasa awo akasiyana anowanika kubva kuFacebook
Kana iyo plug-in ikachengetwa pane rimwe remapeji aunoshanyira pawebhusaiti yedu, yako Internet browser inodhawunirodha inomiririra yeplug-in kubva kumasevha eFacebook muUSA. Nezvikonzero zvehunyanzvi, zvinodikanwa kuti Facebook igadzirise yako IP kero. Pamusoro pezvo, zuva uye nguva yekushanya kwako kuwebhusaiti yedu zvakarekodhwa.
Kana iwe wakapinda muFacebook uchishanyira imwe yemawebhusaiti edu neplug-in, ruzivo rwakaunganidzwa neplug-in nezve kushanya kwako kwakananga hunozozivikanwa neFacebook. Facebook inogona kugovera ruzivo rwakaunganidzwa nenzira iyi kune yako wega mushandisi account ipapo. Kana, semuenzaniso, iwe ukashandisa iyo inonzi "Senge" bhatani paFacebook, ruzivo urwu ruchachengetwa mune yako Facebook mushandisi account uye pamwe yakadhindwa paFacebook papuratifomu. Kana iwe uchida kudzivirira izvi, unofanirwa kubuda paFacebook usati washanyira webhusaiti yedu kana kushandisa yekuwedzera kune yako Internet browser kudzivirira iyo Facebook plug-in kuti isavharwe.
Rumwe ruzivo nezve kuunganidzwa uye kushandiswa kwedata pamwe nekodzero dzako nedziviriro sarudzo mune izvi inowanikwa kubva kuFacebook
Isu tinoshandisa plug-in yesocial network Twitter pane yedu webhusaiti. Twitter ibasa reInternet rinopihwa ne Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, yakazonzi "Twitter".
Twitter inovimbisa kuti zvinodiwa neEU kuchengetedza data zvinoteedzerwawo kana uchigadzira data muUSA.
Kana iyo plug-in ikachengetwa pane rimwe remapeji aunoshanyira pawebhusaiti yedu, Internet browser yako inodhawunirodha inomiririra yeplug-in kubva kumaseva e Twitter muUSA. Nezvikonzero zvehunyanzvi, zvinodikanwa kuti Twitter igadzirise yako IP kero. Pamusoro pezvo, zuva uye nguva yekushanya kwako kuwebhusaiti yedu zvakarekodhwa.
Kana iwe wakapinda paTwitter uchishanyira imwe yemawebhusaiti edu neplug-in, ruzivo rwakaunganidzwa neplug-in nezve kushanya kwako chaiko rwunozozivikanwa ne Twitter. Twitter inogona kugovera ruzivo rwakaunganidzwa nenzira iyi kune yako wega mushandisi account ipapo. Kana, semuenzaniso, iwe ukashandisa iyo inonzi "Goverana" bhatani kubva ku Twitter, ruzivo urwu ruchachengetwa mune yako Twitter mushandisi account uye pamwe yakadhindwa pa Twitter platform. Kana iwe uchida kudzivirira izvi, iwe unofanirwa kubuda kunze kwe Twitter usati washanyira webhusaiti yedu kana kuita zvimiro zvakakodzera mu Twitter yako mushandisi account.
Rumwe ruzivo nezve kuunganidzwa uye kushandiswa kwedata pamwe nekodzero dzako nedziviriro sarudzo mune izvi inowanikwa kubva kuTwitter pa
Isu tinoshandisa YouTube pawebhusaiti yedu. Iyi vhidhiyo portal kubva kuYouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, yakazonzi "YouTube".
YouTube idivi reGoogle LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, inonzi "Google".
Google inovimbisa, uye nekudaro zvakare inotsigira YouTube, kuti zvinodiwa zvekudzivirira data zveEU zvinoteedzerwawo pakugadzirisa data muUSA.
Isu tinoshandisa YouTube maererano ne "Yakawedzerwa data kuchengetedza mode" basa kuitira kuti tikwanise kukuratidza mavhidhiyo. Hwaro hwepamutemo iChinyorwa 6 (1) lit.f) GDPR. Kufarira kwedu zviri pamutemo kuri mukuvandudza kunaka kwewebhusaiti yedu. Sekureva kweYouTube, iyo "yakawedzera kuchengetedza data" basa zvinoreva kuti iyo data yakatsanangurwa zvakadzama pazasi inongoendeswa kune sevha yeYouTube kana iwe uchinyatso tanga vhidhiyo.
Pasina iyi "yakawedzerwa dziviriro yedata", chinongedzo kune sevha yeYouTube muUSA chinozogadzwa kana wangofonera rimwe remapeji edu eInternet pari pakaiswa vhidhiyo yeYouTube.
Kubatana uku kunodiwa kuti ukwanise kuratidza vhidhiyo yacho pawebhusaiti yedu kuburikidza neinternet browser yako. Mukufamba kweizvi, YouTube inongorekodha uye kugadzirisa yako IP kero, zuva uye nguva uye webhusaiti yawakashanyira. Kubatana kuGoogle "DoubleClick" advertising network inotangwa zvakare.
Kana iwe wakapinda muYouTube panguva imwe chete, YouTube inogovera ruzivo rwekubatanidza kune yako YouTube account. Kana iwe uchida kudzivirira izvi, unofanirwa kubuda muYouTube usati washanyira webhusaiti yedu kana kugadzirisa zvakakodzera muYouTube mushandisi account.
Nechinangwa chekushanda uye kuongorora maitiro ekushandisa, YouTube inochengetedza zvachose makuki pamudziyo wako kuburikidza neinternet browser. Kana iwe usingabvumirani nekugadziriswa uku, une sarudzo yekudzivirira kuchengetwa kwemakuki nekuseta yako Internet browser. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezve izvi pasi pe "Makuki" pamusoro.
Isu tinokupa iwe mukana wekunyoresa kune yedu tsamba yemahara kuburikidza newebhusaiti yedu.
Isu tinoshandisa MailChimp, sevhisi yeThe Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, yakazonzi "The Rocket Science Group", kutumira tsamba dzenhau.
Rocket Science Group inovimbisa kuti zvinodiwa neEU zvekuchengetedza data zvichatevedzwa zvakare kana uchigadzira data muUSA. Iyo Rocket Science Boka inopawo
rumwe ruzivo rwekuchengetedza data.
Kana iwe ukanyoresa kuti ugamuchire tsamba yedu, iyo data yakakumbirwa panguva yekunyoresa, senge yako email kero uye, sarudzo, zita rako nekero, ichagadziriswa neThe Rocket Science Group. Uye zvakare, yako IP kero uye zuva rekunyoresa kwako uye nguva zvakachengetwa. Sechikamu chekuenderera mberi kwekunyoresa, mvumo yako yekutumira tsamba yenhau inowanikwa, zvirimo zvinonyatsotsanangurwa uye kutaurwa kunoitwa kune ichi chiziviso chekuchengetedza data.
Tsamba iyi yakabva yatumirwa kuburikidza neThe Rocket Science Group zvakare ine inonzi inonzi tracking pixel, inozivikanwawo sewebhu beacon ”. Nerubatsiro rweiyi pixel yekutevera, tinogona kuongorora kana uye kana iwe waverenga tsamba yedu uye kana wakatevera chero mamwe malink ari mutsamba yenhau. Pamusoro peimwe data yehunyanzvi, senge data yeIT yako system uye yako IP kero, iyo data yakagadziriswa mukuita inochengetwa kuitira kuti isu tigone kukwidziridza yedu yetsamba yekupa uye kupindura kune zvishuwo zvevaverengi. Iyo data saka inoshandiswa kuwedzera kunaka uye kukwezva kwetsamba yedu inopihwa.
Nheyo yepamutemo yekutumira tsamba uye kuongororwa iArt. 6 Para. 1 lit. a.) GDPR.
Google AdWords mit Shanduko-Kutsvaga
Isu tinoshandisa chikamu chekushambadzira Google AdWords uye inonzi shanduko yekutevera pawebhusaiti yedu. Iri ibasa rinoitwa neGoogle LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, rinozonzi “Google”.
Isu tinoshandisa shanduko yekutevera kune yakanangwa kushambadzira kwekupihwa kwedu. Hwaro hwepamutemo iChinyorwa 6 (1) lit.f) GDPR. Kufarira kwedu zviri pamutemo kuri mukuongorora, kugadzirisa uye kushanda kwehupfumi kwewebhusaiti yedu.
Kana ukadzvanya pachishambadzo chakaiswa neGoogle, kutendeuka kwatinoshandisa kunochengetedza kuki pamudziyo wako. Aya anonzi makuki ekutendeuka anorasikirwa nekushanda kwawo mushure memazuva makumi matatu uye haana kushandiswa kukuzivisa iwe pachako.
Kana kuki ichiri kushanda uye ukashanyira imwe peji rewebhusaiti yedu, isu neGoogle tinogona kuona kuti wadzvanya pane imwe yekushambadzira kwedu yakaiswa paGoogle uye kuti wakabva waendeswa kune yedu webhusaiti.
Neruzivo rwakawanikwa nenzira iyi, Google inotigadzirira zviverengero nezvekushanya kuwebhusaiti yedu. Izvi zvinotipawo ruzivo nezvehuwandu hwevashandisi vakadzvanya pane yedu ad (s) uye mapeji ewebhusaiti yedu akazopinzwa. Isu kana mapato echitatu anoshandisawo Google AdWords, zvisinei, anokwanisa kukuzivisa iwe nenzira iyi.
Iwe unogona zvakare kudzivirira kana kurambidza kuisirwa makuki nekuita iwo akakodzera marongero muInternet browser yako. Panguva imwecheteyo, unogona kudzima makuki akatochengetwa chero nguva. Matanho nematanho anodiwa kune izvi, zvisinei, zvinoenderana neiyo Internet browser yauri kushandisa. Kana uine chero mibvunzo, ndapota shandisa basa rekubatsira kana zvinyorwa zveInternet browser yako kana kubata mugadziri wayo kana rutsigiro.
mamwe mashoko pamusoro penyaya iyi uye kunyanya pamusoro pemikana yekudzivirira kushandiswa kwedata.
Isu tinoshandisa Google AdSense kubatanidza zviziviso pawebhusaiti yedu. Iri isevhisi inopihwa neGoogle LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, inonzi "Google".
Google AdSense inochengeta makuki uye anonzi mabhikoni ewebhu pamudziyo wako kuburikidza neinternet browser. Izvi zvinoita kuti Google iongorore mashandisiro aunoita webhusaiti yedu. Ruzivo rwunounganidzwa nenzira iyi rwunotumirwa kuGoogle kuUSA pamwe neIP yako kero uye mafomati ekushambadzira anoratidzwa kwauri nekuchengetwa ipapo. Uyezve, Google inogona kupfuudza ruzivo urwu kune vanobatirana makondirakiti. Nekudaro, Google inozivisa kuti IP yako kero haizobatanidzwa neimwe data kubva kwauri.
Hwaro hwepamutemo iChinyorwa 6 (1) lit.f) GDPR. Kufarira kwedu zviri pamutemo kuri mukuongorora, kugadzirisa uye kushanda kwehupfumi kwewebhusaiti yedu.
Google Remarketing kana "Vateereri Vakafanana" chikamu cheGoogle
Isu tinoshandisa iyo yekushambadzira kana "yakafanana mapoka emapoka" basa pane yedu webhusaiti. Iri ibasa rinoitwa neGoogle LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, rinozonzi “Google”.
Isu tinoshandisa chiitiko ichi kuisa kufarira-kwakavakirwa, kushambadza kwakasarudzika pamawebhusaiti ebato rechitatu anotorawo chikamu muGoogle advertising network.
Kuti sevhisi iyi yekushambadza igoneke, Google inosevha kuki ine nhamba dzakatevedzana pamudziyo wako kuburikidza neinternet browser yako paunoshanyira webhusaiti yedu. Iyi cookie inorekodha kushanya kwako uye kushandiswa kwewebhusaiti yedu nenzira isingazivikanwe. Nekudaro, data rako pachako harizopfuudzwa. Kana iwe ukashanyira webhusaiti yemumwe munhu wechitatu, uyo anoshandisawo Google advertising network, zviziviso zvinogona kutaridzika zvine chekuita newebhusaiti yedu kana zvatinopihwa ipapo.
Kudzima basa iri zvachose, Google inopa kune anonyanya kuzivikanwa mabhurawuza eInternet
Kushandiswa kwemakuki kubva kune vamwe vanopa, semuenzaniso kuburikidza
Sarudzo dzako dzekushambadzira
inogona kudzimwa kuburikidza nekubuda.
Kuburikidza neinozivikanwa sekushambadza kwe-cross-device, Google inogona zvakare kutarisisa maitiro ako ekushandisa pamidziyo yakawanda, kuitira kuti iwe ugone kuratidzwa kunoenderana nekufarira, kushambadza kwemunhu kunyangwe ukachinja zvishandiso. Nekudaro, izvi zvinoda kuti wabvuma kubatanidza nhoroondo yebrowser yako kune yako iripo Google account.
Google inopa rumwe ruzivo nezveGoogle Remarketing pa
affilinet yekutevera makuki
Isu tinoshambadza zvakare zvinopihwa uye masevhisi kubva kune vechitatu mapato pawebhusaiti yedu. Kana iwe ukagumisa chibvumirano nevechitatu-bato mupi zvichienderana nekushambadzira kwedu kune izvi zvechitatu-bato zvinopihwa, isu tinogashira komisheni yeizvi.
Kuti tikwanise kurekodha zvakabudirira kuiswa, isu tinoshandisa iyo inonzi affilinet yekutevera yekuki. Nekudaro, iyi cookie haichengetedze chero data rako pachako. Nhamba yedu yekuzivikanwa chete semupi wepakati uye nhamba yesiriri yezvinhu zvekushambadza zvawadzvanya pairi (semuenzaniso banner kana chinyorwa chinongedzo) ndiyo inorekodhwa. Isu tinoda ruzivo urwu nechinangwa chekugadzirisa mabhadharo kana kubhadhara makomisheni edu.
Kana iwe usingabvumirani nekugadziriswa uku, une sarudzo yekudzivirira kuchengetwa kwemakuki nekuseta yako Internet browser. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezve izvi pasi pe "Makuki" pamusoro.
Tsamba yenhau kuburikidza neWhatsApp
Iwe unogona zvakare kugamuchira tsamba yedu yemahara kuburikidza neiyo WhatsApp yekukurumidza meseji sevhisi. WhatsApp ibasa rakapihwa neWhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, inotsigira WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, ese ari kunzi "WhatsApp ". Mune zvimwe zviitiko, kugadziriswa kwedata remushandisi kunoitika pamasevha eWhatsApp muUSA. Kuburikidza nechitupa zvinoenderana neEU-US data yekudzivirira nhovo ("EU-US Privacy Shield").
WhatsApp inovimbisa, zvisinei, kuti zvinodiwa zvekudzivirira data zveEU zvinoteedzerwawo kana uchigadzira data muUSA. WhatsApp inopawo
rumwe ruzivo rwekuchengetedza data
Kuti ugamuchire tsamba yedu yenhau kuburikidza neWhatsApp, unoda WhatsApp mushandisi account. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo data inounganidzwa neWhatsApp paunenge uchinyoresa, ndapota tarisa kune yambotaurwa nezve WhatsApp data kuchengetedza ruzivo.
Kana iwe ukanyoresa kutumira tsamba yedu kuburikidza neWhatsApp, nhamba yenharembozha yawakaisa panguva yekunyoresa ichagadziriswa neWhatsApp. Uye zvakare, yako IP kero uye zuva rekunyoresa kwako uye nguva zvakachengetwa. Sechikamu chekuenderera mberi kwekunyoresa, mvumo yako yekutumira tsamba yenhau inowanikwa, zvirimo zvinonyatsotsanangurwa uye kutaurwa kunoitwa kune ichi chiziviso chekuchengetedza data.
Iwe unogona kukanzura mvumo yako yekutumira tsamba yenhau chero nguva zvine chekuita neramangwana maererano neArt 7 Para. 3 GDPR. Chaunofanirwa kuita kutizivisa nezvekukanzurwa kwako. Iwe unogona zvakare kuvharira kugamuchirwa kwetsamba nekuisa iyo WhatsApp software pane chako kifaa.
Kuwedzera kweGoogle Analytics
Iyi webhusaiti inoshandisa Google Analytics, sevhisi yekuongorora webhu kubva kuGoogle Inc. ("Google"). Google Analytics inoshandisa anonzi "makuki", mameseji mafaera anochengetwa pakombuta yako uye anoita kuti kushandisa kwako webhusaiti kuongororwa. Ruzivo rwunogadzirwa nekuki nezve mashandisiro ako ewebhusaiti ino runowanzo kuendeswa kune sevha yeGoogle muU.SA uye inochengetwa ipapo. Kana IP kusazivikanwa kwaitwa pawebhusaiti ino, IP kero yako ichapfupikiswa kare neGoogle mukati menhengo dzeEuropean Union kana mune dzimwe nyika dzechibvumirano cheChibvumirano cheEuropean Economic Area. Iyo yakazara IP kero inongotumirwa kune sevha yeGoogle muU.SA uye kupfupikiswa ikoko mune zvisingaite Yakamiririra mushandi wewebhusaiti ino, Google ichashandisa ruzivo urwu kuongorora mashandisiro aunoita webhusaiti, kuunganidza mishumo nezvezviitiko zvewebhusaiti uye kupa mushandisi wewebhusaiti mamwe masevhisi ane chekuita newebhusaiti zviitiko uye mashandisiro ewebhusaiti. Iyo IP kero inofambiswa nebrowser yako sechikamu cheGoogle Analytics haizobatanidzwa neimwe data yeGoogle. Iwe unogona kudzivirira kuchengetwa kwemakuki nekuisa yako browser software zvinoenderana; zvisinei, tinoda kutaura kuti munyaya iyi unogona kusakwanisa kushandisa mabasa ese ewebhusaiti ino kusvika pamwero wavo wakazara. Iwe unogona zvakare kudzivirira Google kubva kuunganidza data rakagadzirwa necookie uye rine chekuita nekushandisa kwako webhusaiti (kusanganisira yako IP kero) uye kubva pakugadzirisa iyi data nekudhawunirodha browser plug-in inowanikwa pasi peiyi link uye isa: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Iwe unogona kudzivirira Google Analytics kubva kuunganidza data nekudzvanya pane zvinotevera batanidzo tinya.
Cookie yekubuda inoiswa iyo inodzivirira kuunganidzwa kwe data rako mune ramangwana paunoshanyira iyi webhusaiti
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve mazwi ekushandisa uye kuchengetedzwa kwedata, ona Google Analytics Terms kana pasi pe Google Analytics pamusoro. Tinoda kutaura kuti pawebhusaiti ino Google Analytics yawedzerwa kuti ibatanidze kodhi "gat._anonymizeIp ();" yakawedzerwa kuti ive nechokwadi chekuunganidza kusingazivikanwe kweIP kero (inonzi IP masking).
Isu tinoshandisa reCAPTCHA sevhisi kubva kuGoogle Inc. (Google) kuchengetedza mibvunzo yako kuburikidza neInternet fomu. Mubvunzo unoshandiswa kusiyanisa kana iko kuiswa kuchiitwa nemunhu kana zvisirizvo nemuchina, kugadzira muchina. Mubvunzo unosanganisira kutumirwa kwe IP kero uye chero imwe data inodiwa neGoogle kuitira reCAPTCHA sevhisi kuGoogle. Nechinangwa ichi, yako yekuisa ichaendeswa kuGoogle uye ishandiswe ipapo. Zvisinei, kero yako yeIP ichapfupikiswa kare neGoogle mukati memamiriro enhengo dzeEuropean Union kana mune dzimwe nyika dzinobvumirana dzeChibvumirano cheEuropean Economic Area. Iyo yakazara IP kero inongopfuudzwa kune Google server muUSA uye kupfupikiswa imomo mune yakasarudzika kesi. Pachinzvimbo chemushandi webhusaiti ino, Google inoshandisa ruzivo urwu kuongorora mashandisiro awunoita sevhisi ino. Iyo IP kero inotakurwa nebrowser yako sechikamu chereCaptcha haizobatanidzwe nedzimwe data reGoogle. Izvo zvakasiyana zvekuchengetedza dhata zvigadzirwa zveGoogle zvinoshanda kune ino data. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Google's zvakavanzika mutemo, ona: https://policies.google.com/privacy?hl=de
Chiziviso chekudzivirira data cheMETIS / VG Wort
Cookies uye traffic traffic
Webhusaiti yedu uye nharembozha yedu inoshandisa "Scalable Central Measurement Method" (SZM) kubva kuKantar Deutschland GmbH kuona maparamita ehuwandu kuona mukana wezvinyorwa zviri kukopwa. Asingazivikanwe akayerwa kukosha anounganidzwa mukuita. Kuti ucherechedze masisitimu emakombuta, kuyerwa kwenhamba yekuwana neimwe nzira inoshandisa cookie yechikamu kana siginicha inogadzirwa kubva kune akasiyana anotumirwa ruzivo kubva kubrowser yako. IP kero inongogadziriswa nenzira isingazivikanwe. Maitiro akagadzirwa achitora kuchengetedzwa kwedata. Chinangwa chega chechirongwa ndechekuona mukana wekuti zvinyorwa zvega-munhu zvikopwe. Hapana nguva vashandisi vega vanozivikanwa. Kuzivikanwa kwako kunogara kwakachengetedzwa. Iwe haugamuchire chero kushambadzira kuburikidza nehurongwa.